I-SABC icacisa ngomklomelo wengoma yonyaka
UMCULI kamaskandi uNtencane othe usebumnyameni ngomklomelo wokunqoba ingoma yokuhlukanisa unyaka athe ufuna ukuzwa ngeSABC ukuthi kukhona yini azokuthola Isithombe: Sigciniwe
THOKOZANI NDLOVU | March 24, 2020
I-SABC isiphumele obala ngokuthi abaculi abawine emncintiswaneni wengoma yokuhlukanisa unyaka okunqobe kuwona uSenzo “ Ntencane” Zondi, ngeke bathole mali ngokunqoba kwabo.
Lokhu kuvele emuva kokuthi kube nokudideka kubantu ngomhlomulo wabaculi abanqobe umqhudelwano, obekungathi nabo bazokhokhelwa ngokuwina kwabo.
I-SABC ithe imali izotholwa ngabalaleli bomsakazo abebevota kuphela.
Umkhulumeli weSABC obambile, uMmoni Seapolelo, uthe indlela abasingathe ngayo lo mqhudelwano nonyaka, bayibuyisele kweyakudala emuva kokuphela kwenkontileka abebenayo neMichael Owen Productions.
“I-SABC ingakuqinisekisa ukuthi umqhudelwano weNgoma Ehlukanisa Unyaka, woKhozi FM ungeminye yemiqhudelwano yomsakazo ebandakanya nabalaleli. Ngokwenqubo yalo mqhudelwano umlaleli ohambe phambili ngokuvota uthola uR50 000, olale isibili athole uR30 000, kuthi owesithathu athole uR20 000. Ekuqaleni isiteshi sikubeke kwacaca ukuthi lo mqhudelwano awufani neSummer song of the Year owawenziwa ngokubambisana neMichael Owen Productions. Ezinye izinto ohluke ngazo yimiklomelo yabaculi abangakhokhelwa lutho ngokuwina kwabo. Ngalokho asisho ukuthi amaciko ashiywe ngaphandle kodwa umculo wawo uyaqhubeka nokudlalwa emsakazweni,” kusho uMmoni.
UNtencane ukuqinisekisile ukuthi ayikho imali ayitholile kwaSABC. Uthe usebumnyameni ngomklomelo ngoba akakaze achazelwe lutho ngawo kodwa usecele imenenja yakhe ukuthi ibhalele iSABC, ukuze aqonde ukuthi kukhona yini azokuthola.
U-Owen Ndlovu usevule necala lenkohlakalo nokuntshontshwa komsebenzi wakhe alibhekise esikhulwini esiphezulu esengamele i-intellectual property yakwaSABC (esiligodlile igama laso).
Okhulumela amaphoyisa ophiko lweDirectorate for Priority Crime Investigation, eGauteng, uCaptain Ndivhuwo Mulamu uliqinisekisile icala eliphenywa oKlebe elivulwe emaphoyiseni.
“Kuphenywa icala lokuphambana nomthetho iTrademark Act 11 of 1967, lokusakaza ngaphandle kwemvume. Okwamanje akukathweswa muntu icala.
“Ngeke sikwazi ukuveza igama noma amagama abathintekayo kulolu phenyo njengoba engekho osethweswe icala wayiswa enkantolo. Ngokwenqubo mgomo yokusebenza kwethu, asikwazi ukudalula amagama abathintekayo lungakaphothulwa uphenyo ngoba lokho kuzolukhinyabeza.
“Uma seluphothuliwe uphenyo, idokodo lizothunyelwa ophikweni lwezokushushisa ukuthi luthathe isinqumo,” kusho uCaptain Mulamu.
I-SABC ithe isamile ekutheni akekho umsebenzi wayo ontshontshe umsebenzi ka-Owen Ndlovu.
Ngokwesitatimende ebesikhishwe yiSABC ngeledlule ngokuhlomula kwabaculi, ithe ibibhekise kubalaleli abavotile ukuthi yibona abazothola imali. UMmoni ugcizelele ukuthi bebebhekise kubalaleli abebevota ukuthi yibona abazowina ezindaweni ezintathu abazibalulile.